မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံးသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာအမိုးပြားများ ကိုမန္တလေးမြို့တွင် တပ်ဆင်ခြင်း - De Heus
ပင်မစာမျက်နှာ / သတင်းများ / သတင်းများ / မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံးသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာအမိုးပြားများ ကိုမန္တလေးမြို့တွင် တပ်ဆင်ခြင်း
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြီးမားဆုံးသော နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးဆိုလာအမိုးပြားများ ကိုမန္တလေးမြို့တွင် တပ်ဆင်ခြင်း
07-09-2018 - မြန်မာနိုင်ငံ၏အကြီးမားဆုံး နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်သုံးစက်ရုံအမိုးကို မန္တလေးမြို့သာစက်မှုဝန်းအတွင်းမှာတည်ဆောက်ပြီးစီးခဲ့ပါသည်။
ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့များသည် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကမ္ဘာကြီးကိုအမြဲတစေဒုက္ခပေးနေတဲ့အရာဖြစ်ပြီး ကျွန်တော်တို့လူသားတွေအနေနဲ့လည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ရုံ အလုပ်ရုံတွေကနေ နေ့စဉ်နဲ့အမျှထုတ်လွှတ်နေကြတဲ့ ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ဓာတ်ငွေ့တွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်မယ့်နည်းလမ်းများကိုစဉ်ဆက်မပြတ်စဉ်းစားနေကြရပါတယ်။
ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံဟာ နေရောင်ခြည်စွမ်းအင်ကိုအသုံးချပြီးလုပ်ငန်းတွေလည်ပတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်တွေကိုရရှိထားတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တာနဲ့အညီ၊ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံး Rooftop Solar System တစ်ခုကို မန္တလေးမြို့ (မြို့သာစက်မှုဝန်း) အတွင်းမှာရှိတဲ့ De Heus Myanmar အစာတောင့်စက်ရုံမှာ မကြာသေးမှီက တပ်ဆင်ပြီးစီးခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။
အဲ့ဒီ Rooftop Solar System ကနေပြီး လုပ်ငန်းလည်ပတ်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအင်အရင်းအမြစ်တွေကိုအတိုင်းအတာတစ်ခုအထိရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ၊ တစ်နှစ်လျှင် 663 MWh ထိပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်တစ်ခုကိုထုတ်လုပ်ရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပြီး ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုဒ်ထုတ်လွှတ်မှုကိုလည်း 1.5 မထရစ်တန်အထိလျှော့ချပေးသွားနိုင်မှာလည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဒါကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကြီးမားဆုံး Rooftop Solar System ကိုတပ်ဆင်ထားတဲ့ De Heus Myanmar Ltd (မန္တလေးမြို့သာ) စက်ရုံဟာပြန်လည်ပြည့်ဖြိုးမြဲစွမ်းအင်အသုံးပြုထားတဲ့အစာတောင့်စက်ရုံတွေထဲမှာမှ တစ်ကယ့်ကိုဂုဏ်ယူစရာပြယုဂ်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါပြီ။
ဒါဟာ De Heus Myanmar Ltd ရဲ့ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာအပေါ်မှာထားရှိတဲ့ Responsibilities တွေထဲကတစ်ခုဖြစ်ပြီးရှေ့ဆက်သွားမယ့်ဦးတည်ချက်တွေထဲကအရေးပါတဲ့ခြေလှမ်းတစ်ရပ်လည်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
To reduce our CO2 emission we’re continuously looking for solutions to minimize our CO2 footprint.
In Myanmar,acountry with an extensive amount of sun hours and sun power, this resulted in the realization of the largest solar rooftop in the country.
This investment was done during the development of the new factory and warehouse in 2018. The solar rooftop is able to produceaconsiderable part of our energy consumption in this location.
In total,a663 MWh of renewable energy per year is produced and therefore we will save 1.5 MT of CO2 emission. Our Myanmar plant in Mandalay is the most sustainable feed mill of Myanmar andaleading example on how we reduce our own CO2 footprint.